लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलिया हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ ! - Mitho Khabar
June 28, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलिया हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ !
काठमाडौँ। ५ बर्षकी छोरीकी आमा भै सकेकी एकजना सफा च’रित्रकी साथीले पहिलो पल्ट मलाई सुनाई के गर्नु यार सुष्मा बुढो आफूलाई पुगेपछि उता पट्टी फर्कीएर मज्जाले सुत्छ, आफूलाई नि’न्द्रै लाग्दैन ।
केही महिना पछि उसलाई फोन गर्दा उसले अर्को स’मस्या सुनाई खोई के भको हो यसलाई केटीसंग पल्केर हो की के हो मेरो र छोरीको त वास्ता ब्यास्ता गर्दैन फेसबुकमा मात्रै झुण्डि रहन्छ । मैले श्रीमान श्रीमतीबिचको सामान्य कुरा सम्झेर उसलाई सम्झाएँ । उ अफिसमा काम गर्छे, लोग्ने र छोरीको पनि राम्रै ख्याल राखेकी छ।
बुढाबुढीमा हुनुपर्ने सबै ब्य’वहार सामान्य छ । दुवै पट्टीका परिवारका प्रिय बुहारी ज्वाईं हुन् । पैसा छ, सुविधा छ सबै राम्रो छ तै पनि उसले पछिल्लो समय पटक-पटक यो कुरा दोहोर्याईरहेकी छ ।
उ शिक्षित महिला हो, श्रीमानलाई चौपट्टी माया गर्छे, तर पनि उ खुशी छैन भन्ने अर्थमा समाजले त उसलाई चरित्र गलत भएकी, सेक्स धेरै चाहिने रहेछ त्यही भएर बुढासंग रि’स उठेको भन्न मात्र जानेको छ । लोग्नेलाई उसले यो कुरा राख्नै सक्दिन किनकी उसको श्रीमानले बुझेको से’क्स भनेको लोग्ने मा’न्छेको वि’र्य स्ख’लन मात्र हो त्यसमा स्वास्नीको क’र्तव्य लोग्नेको ईसारामा श’रिर मिलाउनु मात्र हो ।
अर्की दिदीले पनि आफ्नो स’मस्या सियर गरिन् छोरा पेटमा आएपछि बुढाले मलाई वास्ता गर्द छोडेको अहिले छोरा १० बर्षको भयो दुनिया केटीसंग लागेको छ भनेर सुनाउँछन्, जीन्दगी यस्तै रहेछ बैनी । लोग्ने भनेको स्वा’स्नीको श’रिर ब’लियो हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ । केहि बर्ष पहिले म डेरा गरेर बस्ने घरको पल्लो घरमा एकजना २७ बर्षकी युवती बस्थिन उनको १ वटा छोरा थियो हुर्किसकेको ।
कसो कसो उनि र म साथी बनेका थियौं । मिल्न थालेपछि उनले सुनाएकी थिईन् सुष्मा मेरो त १४ बर्षको हुँदा ३१ बर्षको केटासंग बिबाह भएको हो । बिचार नमिलेपनि छोरा जन्मियो ।उसको माया नै नलागेपनि अरुसंग जान सकिन समाजको ड’रले । म अहिले कसैको प्रेममा छु ,
यो कुरा थाहा भयो भने मलाई त वे’श्या नै सम्झन्छन् किनकी उसंग मेरो शा’रिरीक स’म्बन्ध पनि छ । मैले कोशिष गरेको हुँ आफ्नै लोग्नेबाट माया पाउन तर खै के मिलेन मिलेन । उसलाई सुनाउँ भने आफ्ना बानि सुधार्न मायाले फकाउन भन्दा कसले सिकायो यो कुरा भनेर उल्टो खेप्छ ।
आईमाई मन त हो, मायाले बोलोस् कियर गरोस संगै घुम्न जाउँ, जस्तो लाग्दोरहेछ । उसले मेरो वे’वास्ता गर्दा म नचाहँदा नचाहँदै पनि अर्कैको मायाँमा परें । यी त प्रतिनिधी पात्र र उदाहरण मात्र हुन् । धेरै अघि देखी म यौ’नले निम्त्याउने स’मस्या माथी कथा लेख्दै आएकाले पनि म संग यस्ता समस्याका चाङ नै छन् । मेरो बिचारमा यौ’न कुण्ठा र त्यसले निम्त्याउने दु’र्घटना सा’मान्य कुरा होईनन् ।
नेपालमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन रुपा सुनारलाई युरोपेली युनियनले सुटुक्क डेढ करोड दिएको खुलासा !
मन मिले के हुदैन सबै हुन्छ सबिना..(भिडियो सहित)
तेरिया फौजा मगरका एकदमै रुचाईएका केही लोभलाग्दा बाेल्ट तस्बिर हेरौं
June 13, 2021 Mitho Khabar
July 6, 2020 July 6, 2020 mithokhabar
५ कुरा जसले यौ’न सम्प’र्कमा चर’म सन्तुष्टी लिन जान्नैपर्नेछ हेर्नुहोस्
June 25, 2021 mithokhabar